minthantzaww: အမိမြန်မာနိုင်ငံသားသမီးများ Culture ထိန်းသိမ်းရေး ဥပမာ.
အမိမြန်မာနိုင်ငံသားသမီးများ Culture ထိန်းသိမ်းရေး ဥပမာ.
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့အရာများကို ရောက်တဲ့နိုင်ငံ၊ ရောက်တဲ့နေရာက မြန်မာပြည်သားများက ပေးလာပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် တကယ်၊ ချစ်မြတ်နိုးစွာ အနစ်နာခံ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိရင် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားများ
ကလဲ ကိုယ့်ကို ကူညီလာပါတယ်။ ရေးချင်တာက .. အမေရိကားနိုင်ငံက ချမ်းသာတယ်။ အမေရိကားနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အီသီယိုပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် သံရုံ့း၊ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံမှာလဲ အမေရိကန်သံရုံးရှိတယ်လေ..။ အီသီယိုးပီးယား ဘယ်လောက်ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲ။ အဲဒီဆင်းရဲခြင်းက အမေရိကန်သံရုံးကို ဒုက္ခပေးသလား။ သွားပြီးတော့ Affect ဖြစ်သလား..။ မဖြစ်ဘူး..။ အီသီယိုးပီးယားမှာ ရေတွေမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ .. အီသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးကြီးကတော့ ရေတွေ အပြည့်ပဲ။ ဘယ်က ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ သူနေနေတာလဲ။ အမေရိကားက ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ သူနေနေတာ။ အီသီယိုးပီးယာမှာ မစားနိုင်တဲ့ Cheese သူစားနေရတယ်။ ..အီသီယိုးပီးယားမှာ မစားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေအားလုံး အီသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက အကုန်စားနိုင်တယ်။
အရေးကြီးတာ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရက်နဲ့ ကိုယ်စိတ်၊၀ိညာဉ် Mody, Mind and Spirit ရဲမွဲတေနေတာက နိုင်ငံအရေးဆိုပြီး ကိုယ်ကျိုးသမားတွေ များတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်မရှင်ကြလို့...။
ပြီးတော့မှ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးသွားလိုက်။ ဂျပန်စာ တခုမှ မစားရဘူး။ အမေရိကန်အစာတွေပဲ ချကျွေးတာ။ သူတို့ ဘာပဲစားသလဲ .. စားပြတာ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ ငါတို့က အမေရိကန်တွေဖြစ်တယ်ကွ။ .. အမေရိကန်အစာပဲ စားတာကွ။ ဒါပဲလား .. မဟုတ်ဘူ။ သံရုံမှာ စားဖူးတဲ့လူတွေ ရှိသလား။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် စားဖူးပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ပါ။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အမှုတော် ဆောင်လာရင် ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော် ဒေးဗစ်ဟာလဲ သံရုံးတွေဘာတွေ သွားစားရတယ်။ မစားတတ်တော့ သူများတွေ ဘယ်လိုစားတယ်ဆိုတာ ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့... ဇွန်းတွေကလည်း အများကြီး၊ အရှက်တွေ ကွဲတော့မလို့ .(ရယ်သံများ) ..အဲဒီဇွန်းကအစ...အမေရိကန် တံဆိပ်နဲဗျ။ American Flag လေ..။ အသားတံဆိပ်ရိုက်ထားတာ။ ဇွန်းကလည်း ဘာဖေါ်ပြသလဲဆိုတော့ ဒီဇွန်းက ငါတို့အမေရိကားက လုပ်တဲ့ဇွန်းကွ၊ ပန်းကန်.. အံမယ်၊ ပန်းကန်ရွှေ့လို့မရအောင် .. အပေါ်နဲ့အောက် အလံရှိတဲ့နေရာမှာ လုံးဝရွှေ့လို့မရအောင် ပန်းကန်ကို ဒိအတိုင်းထားထားရတယ်။ Culture ကို အဲဒီလိုထိန်းတာ..။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာ နိုင်ငံသားဆိုရင် ..ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားရဲ့အတွေးအခေါ် (စရိုက်ဟောင်းများကို စွန့်ပစ်ပြီ၊ စရိုက်အသစ်များကို) ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ စကျင့်ကြရအောင်။
ဒီနိုင်ငံရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပုဆိုးတွေ၊ ထမီတွေ သိပ်မ၀တ်ကြတော့ဘူးလေ။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့ ထိုင်းပုံစံဝတ်ကြတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတယ်..ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ နိုင်ငံခြားတယောက်ရဲ့ Culture ကိုတော့ ထိန်းရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းရမယ်။ သူတို့ထိန်းထားတာ .. အပြက်ထိန်းထားတာ။ ပြီးတော့ စီးတဲ့ကား..။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက်လို့ ဂျပန်ကားကောင်းတော့ ဂျပန်ကားမစီးဘူးဗျ..။ အမေရိကား အကောင်...ဆုံးကားကို ဂျပန်မှထုတ်ပြီးတော့ ကြွားတာ။ ပြောင်နေတာပဲ။ သံအမတ်ကြီးကလည်း ပြောထားတယ်။ အဲဒီကား.. ကောင်းကောင်းဆေးထား။ ဆေးရတယ်..။ ဆေးရုံတင်မကဘူး။။ ဆေးသုတ်၊ ပြောင်နေအောင် ဆေးသုတ်ရတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီသံအမတ် Ambassador ဆိုတာ သံအမတ်ကြီးပေါ့ .. သံအမတ်ကြီးက ဦးထုပ်နဲ့။ အမေရိကားကတောင် ရိုးရိုးလာတာမဟုတ်ဘူး။ တက်ကဆက်က Texas ကလာတဲ့ ဦးထုပ်အကြီး...ကြီးနဲ့.။ ပြီးတော့ သူအမေရိကန်ဖြစ်တယ်။ တက်ကဆက်ကလာတယ်ဆိုတာ သိအောင် အမိုးဖွင့်ကားကြီးနဲ့ .. ဟာ...အမိုးပွင့်၊ မောင်းထွက်သားတာ..လူတွေက ၀ိုင်းကြည့်နေရတာ။ သူလုပ်နေတာ အလကားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကြွားနေတာ... (ရယ်သံများ)။ ဘာကြွားတာလဲသိလား.. ငါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ ငါ့နိုင်ငံ ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝသလဲ ..ကြည့်...ဆိုပြီး ချပစ်တာ။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်သားသမီးတွေ .. ကြည့်...ဆိုပြီး မပြောနိုင်ဘူး။ သူများကိုပဲ ရှောက်ကြည့်ပြီး...သူများကိုအားကျနေကြတယ်။ ကိုယ်က အမိမြန်မာပြည်ကြီးက မေမေက ပြောမယလေ.. သနားလိုက်တာ။ မေမေတို့ ဘိုးဘွားဘောင်ဆက်က ဒါလောက် ကြွယ်ဝရဲ့သားနဲ့ အခု အမိမြန်မာပြည်သားများ အချင်းချင်းကို အားမကိုးဘူး။ သူများကို ရှောက်ကြည့်နေတယ်။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမများတို့ .. ဟာသလေးတော့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးက ၀မ်းနည်းနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဘာလဲ ..Culture ..ငါ ဟာ အမိမြန်မာနိုင်ငံသား။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ သဏ္ဍန်၊သရုပ်ကို ဖေါ်ပြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု Culture ဖြစ်နေရပါမယ်။
ဆရာဒေးဗစ်လား တရားဟောချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံနှင့် ဆီလျှော်အောင် ၀တ်မှုန်(စင်ကာပူ) မှ ကောက်နုတ်ဘာသာပြန်ပါသည်။ မူရင်းကို မုရန်မဂ္ဂဇင်း တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by minthantzaww at 05:26